Qodobkaan, waxaan ku tusineynaa sida looga jawaabo si rasmi ah, iyadoo email, Saaxiibkiis oo ku weydiiya macluumaad ku saabsan xaalad xirfadeed. Waxa kale oo aad ka heli doontaa a email template inaad raacdo dhammaan jawaabahaaga.
Ka jawaab codsiga macluumaadka
Marka asxaabtaada ku waydiisto, ama email ama hadal ahaan, su'aal la xidhiidha shaqadaada, waa caadi inaad isku daydo inaad caawiso oo aad siiso jawaab feker ah oo guul leh. Inta badan, waxaa lagugu qasbi doonaa inaad ku soo noqotid email ahaan, sababtoo ah waa inaad waqti qaadataa si aad u eegto macluumaadka aad kala socotid, ama sababtoo ah jawaabta waxay u baahan tahay baaritaan qaar ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad uga jawaabtaa isaga oo u soo diraya e-mail, caqli iyo wixii ka sarreeya oo dhan oo keenaya wax la xiriira codsigiisa.
Talooyin qaar ka mid ah ka jawaab celinta asxaabtaada oo kaa codsanaya macluumaad
Waxaa laga yaabaa inaadan haysan jawaabta. Halkii aad wax u sheegi lahayd, ka dibna u sheeg qof si fiican u yaqaan inuu u sheego. Waxa ugu muhimsan ee la sameeyo waa in laga jawaabo in aadan aqoon, dhibic. Waa in had iyo jeer la siiyaa fursad uu dib ugu soo kabsado, sababtoo ah himiladu waa inuu caawiyo.
Haddii aad haysatid jawaabta, ka dibna u qaado waqti aad ku hubiso, si aad u buuxiso, si e-mailkaaga uugu filan isaga oo aan u baahneyn in uu raadiyo macluumaad dheeraad ah meel kale.
Gabagabada e-maylkaaga waa inaad u muujisaa inaad sii joogi doonto haddii uu heysto su'aalo kale, isla markiiba soo raaci emailkaaga ama xitaa kadib.
READ Warbixinta nashaadaadka, waa aaladda lagama maarmaanka u ah faafinta macluumaadkaaga.
Halkan waxaa ku yaal shey emayl ah oo loogu jawaabayo saaxiibkaa oo weydiinaya macluumaad:
Ujeeddo: Codsi macluumaad.
Waxaan kuugu soo laabanayaa codsigaaga ku saabsan [ujeedada codsiga].
Waxaad ka heli doontaa ku lifaaqan faylka oo ku jira arrimaha ugu muhiimsan ee mawduucaan, kaas oo, waxaan u maleynayaa, inuu si weyn kuu caawin karo. Waxaan sidoo kale [magaca saaxiibkaa] ku qoray nuqul ka mid ah emailkan, sababtoo ah waxay kaa caawinaysaa xitaa ka sii wanaagsan, wuxuu wax badan ka qabtay mashruucan.
Waxaan ku sii jirayaa kharashkaaga haddii aad qabto su'aalo kale,
Email template si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka qof ka mid ah saaxiibka Agoosto 26th, 2020Tranquillus
horeEmail template si aad raaligelin ugu noqoto kormeeraha
socdaFariin email u dir si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka kormeeraha